EEG: Sida ay u muuqan karto SHAXDA Chelsea marka uu xirmo suuqa kala iibsiga BISHAN Janaayo….(5-xiddig oo waa Wayn oo ku soo biiri kara Blues) – Gool FM
EEG: Sida ay u muuqan karto SHAXDA Chelsea marka uu xirmo suuqa kala iibsiga BISHAN Janaayo….(5-xiddig oo waa Wayn oo ku soo biiri kara Blues)
Byare January 9, 2019
(London) 09 Jan 2019. Tababare Maurizio Sarri ayaa durba Suuqa bisha Janaayo la soo wareegay Christian Pulisic oo uu adduun dhan 58-milyan kaga soo iibsaday kooxda Dortmund, wuxuuna iminka rajeynayaa inuu shan Ciyaartooy oo cusub la soo saxiixdo.
Pulisic kuma soo biiri doono shaxda Blues ilaa laga gaaro dhammaadka kal ciyaareedkan maadaama amaah lagu siiyay kooxdiisa.
Sidaa darteed The Sun ayaa tooshka ku ifisay shan xiddig oo laga yaabo inay Blues shaxdeeda ku soo kordhiso inta lagu guda jiro Bishan.
Dhaliyaha Juventus ee amaahda ku jooga Milan Gonzalo Higuain ayaa aad loo filaya inuu dib ula midoobo macalinkiisii hore ee Sarri.
Sidoo kale kooxda reer London ayaa ku han wayn inay hesho kabtanka Inter Milan Mauri Icardi, Daafaca dhexe ee Bayern Munich Mats Hummels, daafaca garabka Midig ee reer Albania Elseid Hysaj iyo xiddiga qadka dhexe Cagliari Nicolò Barella.
Haddaba EEG sida ay u muuqan karto SHAXDA Chelsea marka ay bishan ku soo biiraan xiddigaha la filayo:
EEG SAWIRKA: Arsenal oo dib Tababarka ugu soo dhaweysay 6-xiddig oo waa Wayn